WARBIXIN: M/weynaha Hirshabeelle oo afka furtay, kuna dhawaaqay halis weyn oo taagan.
Dhawr iyo toban qof ayaa lagu soo xiray hawlgallo ciidamada milatariga Soomaaliya ka wadaan magaalada Balcad iyo agagaarkeeda, kuwaas oo la xiriirrinayo inay la shaqaynayeen kooxda Al-Shabaab oo todobaadkan weerarro dad badan lagu dilay ka fulisay waddada u dhaxaysa magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar.
Sabtidii ina dhaaftay ayay kooxdu dad 20 qof ku dhow ku dishay qaraxyo iyo weerarro toos ah oo ay ka fulisay deegaanka Gololleey oo qiyaastii 10km u jira degmada Balcad.
Ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan milatariga Soomaaliya ayaa tan iyo shalay hawlagal ka waday magaalada Balcad iyo deegaanada ku dhaw dhaw.
Saaka waabarigii ayay ciidamadu galeen xaafadaha magaalada Balcad, halkaas oo lagu soo xiray ugu yaraan todobo qof oo lagu tuhunsan yahay inay la shaqaynayeen kooxaha weerarrada gaysta, sida ay BBC-da u sheegeen dadka deegaanka.
Taliyaha qaybta 27-aad ee milatariga Soomaaliya Janaraal Axmed Maxamad Taradishe oo aan taleefanka kula hadalnay ayaa sheegay in tirada tan iyo shalay la xiray ay kor u dhoofayso toban qof isagoo sheegay inay heleen xog la xiriirta in dhammaan dadkaasi ay la shaqaynayeen waxa uu ugu yeeray “kooxaha nabad diidka”.
“Waa dad aad u badan oo laga soo kala qabtay deegaannada Gololleey, Balcad ilaa Hareeri Caadle iyo nawaaxigooda, kulligoodna waa dad dhibaato ku hayay dalka iyo dadka, una shaqeynayay nimanka nabad diidka ah, intooda badan wayba qirteen inay nimankaas la shaqeynayeen, hadda Gololleey 10 ruux ayaa laga soo xiray laakiin tirada rasmiga ah ee guud waan soo saari doonnaa marka uu howlgalka dhammaado.”, ayuu yiri Taliyaha.
Indhawaalaba waxaa taagnaa walaaca dhinaca amniga ee waddada u dhaxaysa Muqdisho iyo Jowhar, waxaana marar badan kusoo laabtay weerarada Al-Shabaab.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamad Cabdi Waare oo ka hadlayay magaalada Jowhar ayaa si cad uga hadlay walaacaasi isagoo ku baaqay in arintaasi wax laga qabto.
“Annaga reer Hirshabeelle haddaan nahay, culeys amni oo aan wax badan qarsannay, oo aan la tacaalnay ayaa na saaran, hadda wuxuu soo gaaray meel aannaan qarsan karin, howlgallada ka socda Shabeellada Hoose, waa dad Soomaaliyeed, waa dad walaalaheen ah, in cadowga laga dulqaado raalli baan ka nahay, laakiin cadowgii Shabeellada Hoose lama leynin, waddankana kama aysan bixin balse annaga ayuu noo soo guuray, halkan ayuuna nala joogaa”, ayuu yiri Madaxweyne Waare, wuxuuna intaas ku daray: “Waxaan ugu baaqeynaa cid walba oo ay arrintan quseyso, laga soo billaabo dowladda dhexe ilaa dadka tuulooyinka inaan ka wada shaqeyno sidii amni darrada wax looga qaban lahaa”.
Arinta la xiriirta in maleyshiyaadkii Al-Shabaab ee laga saaray deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ay u wareegeen gobolka Shabeellaha Dhexe ayaan wax ka weydiinnay taliyaha qaybta 27-aad ee milatariga, wuxuna qiray inay arintaasi jirto, balse ay dhankooda ka hawlgaleen isla markaana ay wiiqi doonaan.
Bishan aynu ku jirno ee Sitembar oo kaliya ayaa la soo tabiyay in qaraxyada ka dhacay waddada isku xirta Balcad iyo Jowhar ay kor u dhaafayaan ilaa toban qarax, waxayna noqotay mid kamid ah waddooyinka ugu khatarta badan, iyadoo si isku xigxigta halkaasi loogu dilay madax ka tirsan maamulka Hirshabeelle, xubno ka tirsan ciidamada dawladda iyo kuwa nabad ilaalinta ee midowga afrika.
Waddadaas ayaa hadda noqotay jidka ay dhimashada ugu badan kala kulmaan ciidamada howlgalka midowga Afrika ee AMISOM.
Intii lagu guda jiray bishan Sitembar, 10 qarax ayaa ka dhacday waddada isku xirta magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Maalintii Jimcada ahayd, 3 qof ayaa ku dhimatay Qarax ka dhashay miido waddada dhinaceeda lagu aasay.
Maalintii Sabtida ahayd, Al-Shabaab ayaa weerar ku dishay 12 askari.
Maalintii Axadda ahayd, saddex Qarax ayaa laga fuliyay waddada u dhaxeysa Balcad iyo Muqdisho.